HTC dia mampiseho sary teaser an'ny iray manaraka M10 | Androidsis
HTC dia mamoaka sary miandrandra ny flagship One M10
Manuel Ramirez | | HTC, About us
Tao amin'ny MWC dia tsy nahatratra ny mpamokatra Taiwanese HTC izahay. Rehefa teo izahay talohan'ny nanombohan'ny karazana fitaovana isan-karazany avy amin'ireo mpamokatra fanta-daza toa ny LG, Samsung, HTC na koa Xiaomi, izay no fotoana voalohany nanitsahany ny tany eropeana tamin'ny fampisehoana ny Xiaomi Mi 5 mahavariana azy , HTC dia nandalo saika tsy voamariky tanteraka afa-tsy Faniriana 530, 630 ary 825. Nambara izy ireo telo andro lasa izay satria smarpthones mora vidy maro izay nanitaran'ilay orinasa Taiwaney ny katalaogin-telefaoniny amin'ity taona 2016 ity izay satria tsy dia hendry izy dia ho sarotra be. Tsy ho an'ny tenany, fa satria isika amin'ny fotoana izay henjana tokoa ny fifaninanana Ary sarotra be ny miavaka, na dia teo aza ny iray amin'ireo orinasa ambony indrindra amin'ny Android.
Tsy manana sainam-pirenena ao amin'ny Mobile World Congress Saika nahatonga anay hanontany hoe aiza ny HTC, na dia afaka milaza aza isika fa novonjen'ireo Desires izay namela azy hikikitra kely ny lohany. Ny HTC One M10-ny dia tsy ho tonga raha tsy amin'ny volana aprily, na dia efa nanomboka nanolotra ny sainam-pireneny miaraka amina teaserzy aza ity orinasa ity izay ahitanao ny teny filamatra "Herin'ny 10", izay ahitanao amin'ny andalana vitsivitsy it It no ho vy vy an'ny telefaona. Teaser izay afaka manome ny sary voalohany, toa tsy ho aiza intsony ny fampahalalana, sary ary horonan-tsary vaovao ho an'ity orinasa ity. Andao izao manantena fa ho azy ireo dia manatanteraka izay andrasan'ny maro izy ireo, satria tena tsy azon'izy ireo izany tamin'ny taona vitsy lasa izay.
1 Teaser mitovy amin'ny sary tena navoaka
2 Ny andinindininy ho tsaho
Teaser mitovy amin'ny sary tena navoaka
Tamin'ny herinandro lasa dia nanana ny vintana hahalala sary tena izy izay tamin'ny telefaona mivantana izahay Iray M10 avy amin'i HTC. Sary mifanentana amin'ity teaser asehon'ny HTC ity ary mitovy ny lafiny vy. Araka ny fivoahana, ny One M10 no telefaona HTC misy symmetry madio indrindra naorin'ity mpanamboatra ity.
Rehefa mahita ny tenantsika amin'ny fotoana anaovan'ny mpanamboatra toa ny LG isika, ankoatry ny fandefasana G5 mahatalanjona, ho toy ny finday avo lenta voalohany, mitondra andiany "namana" Fa kosa, izy ireo dia kojakoja ahazoana mivoaka bebe kokoa amin'ilay telefaona izay hovidian'ny mpampiasa. Amin'ny lafiny Samsung, ankoatry ny Galaxy S7, dia hita fa ny Gear VR izay hitondra zava-misy virtoaly ho an'ireo mpampiasa mialoha ny fividianana ny sainam-bolany vaovao.
Sony mihitsy no mampiditra azy andiana gadget mifandraika, mizara hevitra, ho an'ny araho io andiany X io izay napetraka ho vaovao sy sahaza handray ny vokatra avo lenta. Noho izany dia sisa isika manana mpanamboatra izay, ankoatry ny fampisehoana ireo finday avo lenta finday avo lenta, mitondra andiana "namana" ho antsika. Heverinay fa ny HTC dia hanaraka izany koa amin'ny kojakoja gadget sasany.
Ny andinindininy ho tsaho
Amin'ilay HTC One M10 dia nandalo tsaho maro izay mitarika anay amin'ny a 5,2-inch (1440 x 2560) Fampisehoana Quad HD AMOLED, Qualcomm Snapdragon 820 64-bit quad-core puce miaraka amin'ny Adreno 530 GPU, 4 GB an'ny memo RAM, 32 GB fitehirizana anatiny miaraka amin'ny fanohanana microSD sy Android 6.0 Marshmallow.
Ao amin'ny fakantsary no ahafahany miavaka, satria io dia iray amin'ireo teboka tsara hatrany, ka raha afaka manararaotra tanteraka ny 377MP Sony IMX12.3 sensor, Laser AF, OIS, PDAF ary fandraisam-peo dia hanana zavatra hatokana izahay. Ao amin'ny fakantsary eo anoloana dia tokony hahita Ultrapixel 5MP misy sensor Samsung S5K4E6 isika.
Tsy ho gaga koa isika raha tsy ela dia manana fanambaràna ofisialy miaraka amin'ny daty manokana kokoa noho io volana aprily io avy amin'ny HTC mihitsy. Efa fantatsika tamin'io fotoana io ny fomba nanambaran'ny HTC fa ny flagship One M9 dia latsaka ambany noho ny nantenainy. Ankehitriny isika dia manontany tena raha toa izany no hitranga amin'ny One M10.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » HTC » HTC dia mamoaka sary miandrandra ny flagship One M10
Cores 10 ho an'ny puce ao anaty smartphone? Eny, ny ZOPO Speed ​​8